Tuesday February 25, 2020 - 11:58:23 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dad hor leh ayaa wadanka Iiraan ugu dhimanaya cudurka dilaaga ah ee Carona Virus kaasi oo fara ba'an ku haya dhowr wadan oo dhaca qaaradda Aasiya.
Wararka ka imaanaya wadanka Iiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan sedax qof ay udhinteen cudurka Carona islamarkaana ay ladhibanyihiin boqolaal qof.
Wasaaradda caafimaadka dowladda Shiicada Iiraan waxay sheegtay in dhimashada sedaxda qof ay dadka udhintay Carona ka dhigayso 15 qof waxaana xaalad degdeg ah lagusoo rogay dhammaan gobollada wadanka.
Jamaacadaha iyo iskuullada ayaa lafasaxay waxaana socda gurmad xooggan oo loo fidinayo dadka cudurkan la dhibaataysan, dhinaca kale Carona Virus ayaa kusii faafaya wadamada dhaca mandiqadda Khaliijka.
Dowladda Ciraaq, Cummaan, Kuweyt iyo Baxreyn ayaa sheegay in ay xaalad heegan ah geliyeen muwaadiniintooda kadib markii Carona uu dad soo ritay, dhanka wadanka Tayaaniga dadka udhimanaya cudurka Carona ayaa gaaraya 7 ruux.
wasaaradda caafimaadka dowladda Talyaaniga waxay sheegtay in dad kabadan 200 oo qof uu cudurkan kusoo ritay waqooyiga wadanka.
Sidoo kale dowladda Shiinahay waxay iclaamisay in shalay ay dad gaaraya 71 qof ay cudurka ugu dhinteen gobolka Hubi ee bartamaha wadankaasi tirada dadka shalay dhintay ayaa ah kuwa aad uyar marka loo eego xaaladihii dhimashada ee maalmihii lasoo dhaafay.
Dalka ugu badan ee Cudurka Carona dadka ku dilay waa Shiinaha waxaana kaalinta labaad ku jira Iiraan oo uu ku dilay 15 qof halka Talyaaniga uu yahay dalka sedaxaad wuxuuna ku dilay 7 qof.